Namuhla abantu abaningi kakade sasebenzisa lokhu ifenisha like izingubo zokugqoka. Lokhu akusona isimanga - ephawulekayo isikhala yokonga ngesikhathi esifanayo ukubukeka stylish kanye ezihlukahlukene okukhethwa kukho zenza umsebenzi wazo. Wonke umuntu ufuna ukuthenga iKhabhinethi azinikela efulethini.
Okwavelela lolu hlobo ifenisha - iminyango. Bavula like umnyango imoto elele, hhayi simo zakudala. Lokhu kuvumela design compact kakhulu ukuthi ngisho iminyango angadingi isikhala eyengeziwe. Manje cabanga ngalokho ezinye izinketho zilapho ukuxhumanisa eduze ehholo ukushiya esiphezulu isikhala. Ngaphezu ikhabethe yabo ayikho! Kuyoba okufanele ukubeka closet ephasishi, ekamelweni lezingane. Kulesi esitolo kungaba khona zonke izifiso inhliziyo yakho! Ngakho icabangisise ngalesi kukho uma ufuna, ukuthi, ukuthenga ifenisha zezingane ngesicelo. Enye inzuzo obalulekile - isikhalazo yobuhle. Phakathi nesibalo esikhulu iziphakamiso kungenziwa kukhethwe Lifanele nje ngaphansi ingaphakathi efulethini.
The main-class amabili beya umnyango izingubo zokugqoka - eyakhelwe nezindlu. closet esakhelwe ngaphakathi libhekene yokuthi ukufakwa emnyango ngokuhambisa izinhlelo senzeka ngqo ophahleni kanye yephansi yezakhiwo. Kulesi flange yasibamba futhi kwenzeka ebodeni wenza indima iKhabhinethi emuva udonga. Kukhona hybrid okufushane izixazululo - Semi-lalihlehliswa iKhabhinethi eduze odongeni ngakolunye uhlangothi, ngakolunye uhlangothi iKhabhinethi namanje abakhona.
Inzuzo enkulu amakhabethe esakhelwe - intengo. Ngaphezu kwalokho, uma efulethini yakho emakhoneni mahhala futhi niches, ungasebenzisa nabo rationality esiphezulu. Lokhu kuzosiza ukudweba ngisho amaphutha walala umusa wakho. Nobunzima - izimfuno eliphezulu ekuqineni izindonga, lapho iKhabhinethi ( "okwakhiwa ngalo la mabhodi" is hhayi Kunconywa) titawusungulwa, ukungabi nakwenzeka Transporter kwenye ezindlini endaweni, njengoba ikhabethe esakhelwe - kungcono cishe njalo isixazululo egcizelele endaweni ethile. Ngakho manje ukuthi wazi kahle ukuthi izinga iKhabhinethi gumbi Order ezishibhile futhi ayatholakala ngentengo ephansi.
Wamnaka izakhiwo sikebhe. Uma kuqhathaniswa nabalingani bawo incishisiwe bona ezibizayo, kodwa ukusetshenziswa kwabo efulethini edolobheni, futhi, kunezinzuzo zako. Endaweni yokuqala - ingafakwa kunoma iyiphi ingxenye efulethini uma ungathandi, bese uhlele. Futhi okwesibili - ungakwazi ukuthenga ngomumo eyenziwe.
Material - CPD. Kungenxa yokuthi kwenza umzimba ifenisha njengoba izingubo zokugqoka ejwayelekile. ngokwezifiso Akubizi wenza ifenisha ezinjalo kuphela kulokhu kwaziswa. Ukuze udlulisele tebuciko sikhalo chipboard yokwakha yaseGrisi laminate noma melamine. Ngokuvamile, ipuleti ukujiya ivela amamilimitha angu-16 kuya ku-18. Ezimweni ezingavamile ukusebenzisa plate 25 kwangu. Iminyango esimweni ejwayelekile eyenziwe MDF - ukukhiqizwa udoti ohlangene izinkuni. Lena enye inketho imvelo. Njengoba kukho eshibhile iwukuba chipboard. Njengoba kucaca ukuthi iningi etholakalayo amakhabethe enjalo Coupe nokuhleleka eliphezulu iKhabhinethi Coupe ephansi etholakalayo eMoscow nakwamanye izifunda Russian.
Ebusweni elingaphandle esibukweni kuyinto amakhabethe ephahlwe. Uma, nganoma yisiphi isizathu, wafuna uyigcine incwadi noma isidlo, kungenzeka oda kusukela ingilazi eqinile futhi esobala. Kufanele kugcizelelwe ukuphepha izibuko yesimanje - uma ungumeqi, bese izingcezu izogcina ifilimu ovikelayo, okuyinto ibekwe esibukweni.
Ingxenye ebalulekile yokuphikelela umklamo - uzimele ebambe indwangu, ivumela ukuvula umnyango faka. I ozimele zakhiwe ngensimbi kanye ne-aluminium Indlela yesibili akukhetha, selokhu isakhiwo etholwe cishe noiseless namaphaphu.
Ukugqoka ekhoneni - ifenisha ukhululekile ze ezindlini ezincane
Imidwebo ezindongeni indlu. Imidwebo ezindongeni namaphakathi nezwe. Imidwebo owawusegumbini nursery
Sales Manager: imisebenzi nezimfuneko kuso